COVID-19 oo loo yaqaano corona virus Arkiv - Mino Danmark
Hel wararka ugu muhiimsan ee COVID-19 oo ka socota Wiisarada caafimaadk iyo dowlada deenishka
Talo waanagsan oo ku saabsan adiga, kuwa ehelkoodu qof ka mid ahi yahay kooxda halista ku jirta//Gode råd til dig, der tilhører en risikogruppe
Talo waanagsan oo ku saabsan adiga, kuwa ehelkoodu qof ka mid ahi yahay ku jirto kooxda halista ah//Gode råd til dig, der er pårørende til en i risikogruppen
Jeermiska cusub ee koroono-Ilaali naftaada iyo dadka kale//Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre
Kuwa idinka mid ah ee waaweyn ama qaba xanuunada mudo dheer//Til dig, der er ældre eller syg
Qawaaniinta ku saabsan carruurta iyo ciyaar ku balanka - Retningslinjer om børn og legeaftaler
JOOJI Ma waxaad tahay booqde? - STOP! Er du besøgende?
Talobixin ku saabsan faayraska koroono, ee loogu talagalay dadka ku nool guryaha xanaanada, hoyga guryaha lagu sugo iyo waaxaha la isku daweeyo - Råd om coronavirus til dig på forsorgshjemmet, herberget, værestedet eller behandlingsstedet
Tallobixin ku aadan caafimaadka maskaxda - Gode råd om mental sundhed
Tallo bixin loogu tallogalay haweenka uurka ah - Gode råd til gravide
SU’AALO iyo JAWAABO Qoysaska carruurta leh - FAQ til børnefamilier
Smitte|top waa app nagu caawinaya dhammaanteen inaan joojino faafitaanka COVID-19 ee Denmark.
App-ka wuxuu suurtagal kaaga dhigayaa inaad ogeysiiso halista caabuqa dadka aad u dhowdahay laakiinse aadan aqoon fiican u laheyn, tusaale ahaan gaadiidka dadweynaha ama maqaayadaha.
Marka ay dadka isticmaalka app-ka kordhaan, silsiladaha faafinta caabuqa baa yareyn karnaa.
App-ka smitte|stop ayaa ku siinaya
Ogeysiis, haddii aad u dhowdahay qof haysta cudurka coronavirus oo cusub. Waa lagu soo ogeysiinayaa talooyinka maamulku soo gudbiyey, si silsilada caabuqa loo joojiyo.
Awoodda aad u diri karto farriin dadka kale ee aad u dhaweyd, haddii lagaa helay cudurka coronavirus oo cusub. Waad ogeysiinaysaa dadka kale iyagoo aan arkeyn cidda aad tahay, meesha ama goorta ay kuu dhowaayeen.
Ku saabsan smitte|stop
Waa ikhtiyaar in aad isticmaashid oo soo dajisatid smitte|stop.
App-ku waa mid sugan oo ilaalin doona xogtaada taleefanka.
Xogta ku saabsan cidda aad isu dhowdihiin, waxaa lagu kaydiyaa taleefankaaga kaliya, markaa ma jiraan masuuliyin u adeegsan kara macluumaadka taleefankaaga ku jira.
App-ka waa mid dhameystiran oo dhijitaal ah, oo ku wajahan dadaallada kale ee dowladdu naga caawinayaan oo ah in aanu is daryeelno iyadoo bulshada ay dib isu fureyso.
App-ka waxa lagu soo saaray wadashaqeyn dhex martay Wasaaradda Caafimaadka iyo Waayeellada, Wakaaladda Deenishka ee Amniga Bukaanka, Maamulka Caafimaadka, Guddiga Digitalka, Machadka Dowladda ee Serum iyo Netcompany.
Waxaad ka helaysaa app-ka smitte|stop meesha aad caadiyan kala soo baxdid app-yada moobaylka.
Laga bilaabo Isniinta, 8da Juun, 2020, qaybo badan oo Denmark kamid ah ayaa dib loo furi doonaa. Waxa laga hadlayaa:
Hoolalka ciyaarta, hoolalka dabbaasha, garoomaha ciyaarta iyo meelaha lagu maydho
Hoolalka isboortiga iyo xarumaha jimicsiga
Garoomada madaddaalada ee dibedda – oo xaddidaad leh madaddaalo qaarkood ah
Hawlahasamarka ee carruurta iyo dhalinyarada
Aroosyada iyo xafladaha waa weyn – oo ay suuragal tahay in la isoogu yimaado 500 oo qof oo xaalado gaar ah jira, haddii ay ka dhacdo makhaayad u adeegta cuntada iyo hool sharixidda. Si kastaba ha noqotee, looma ogola in la kiraysto guriga shirarka ama wixii la mid ah oo la uruuriyo 500 oo qof
Shirarka iyo kulano guud – oo ay suuragal tahay in la isoogu yimaado ilaa 500 oo qof iyadoo xaaladaha gaar jiraan
Kubadda Cagta – iyadoo ay suurtagal tahay in la uruuriyo ilaa 500 oo qof iyadoo jiraan xaalado gaar ah.
Mamnuucida goolaha isu imaanshada ayaa kor loo qaadayaa laga bilaabo 8da Juun, 10kii qof waxa loo badalayaa ilaa iyo 50 qof.
Dowladdu waxay dooneysaa in xayiraadda golaha bulshadda laga bilaabo 8da Luulyo loo kordhiyo 100 qof, 8da Agoostona loo kordhiyo ilaa 200 oo qof. Tani waa rabitaan weli lama dhaqan gelin.
Kala duwanaanshaha goboladda
Sababo ku saabsan cadaadiska cudurka oo kala duwan marka la fiiriyo goboladda, ayaa sidoo kale jira kala duwanaansho heer gobol ah oo ku saabsan dib-u-furista dalka. Tusaale ahaan, dhamaan shaqaalaha dawlada dhinaca galbeedka Storbælt ka xigga, hada waxay haystaan ​​fursad ay jidh ahaan ku kula kulmaan goobahooda shaqadda. Goobaha shaqada bulshada ee Gobolka Sjælland iyo Gobolka Caasimaddal ayaa la filayaa inay dib u furmaan Isniinta, 15ka Juun.
Soo koobid ku saabsan shika-jaraa’ideed ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Jimcaha,bisha Maayo, maalinta 29 ee 2020
Dhammaan safarrada dibedda talado waa illaa iyo 31da Agoosto in la safrin. U safridda Norwey, Iceland iyo Jarmalka waa la ogalyahay.
Laga bilaabo Juun 15da, Denmark waxay xuduudaha u furi doontaa booqadayaasha ka yimaada Norway, Iceland, iyo Jarmalka. Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri doona xayiraadyo dhowr ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha ka yimaada waddamadaas. Waxyaabaha kale. waa inay ugu yaraan Denmark joogaan 6 habeen hadey soo safraan, waana inaysan joogin caasimada. Baaritaan qaadis baa lagu sameyn doonaa xuduudaha wadanka.
Illaa iyo hada, xadku wuu ka xirnaanayaa martida Sweden. Tani waxa keentay in ay hab ka duwan loola dhaqmey xaaladda caabuqa corona ee waddankaas deriskeena ah.
Fasaxa samarka ka dib, furitaanka xadka ayaa la fiirini doonaa ee wadamada kale Schengen.
Dhaqanka dhammaanteen waa mid muhiim ah sida ay noqoni doonta bulshada dib loo furayo. Tani waxay sidoo kale khuseysaa haddii aanu safarno samarka, , sida aan u dhaqanno markaanu safarka ku jirno.
Haddii aad u safarto dalal kale, waxaad halis ugu jirtaa inaad cudurka qaadsiiso oo aad cudurka u soo qaadatid guriga. Sidaa darteed waxa lagula talinayaa in laga fogaado u safridda magaalooyinka waaweyn. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa in aad socdaal ahaan, la socotid wargalinta ku saabsan xayirinta wadankaad tagtey.
Mas’uuliyiinta caafimaadku waxay kaloo aad kugula talinayaan inaad is galiso 14 maalmood oo karantiil ah marka aad dibadda ka soo noqotid, xitaa haddii ay tahay safar gaaban oo aad ku tagtey Sweden.
Soo koobid shir jaraaid ee 7dii Maajo oo ka socota raiisel wasaaraha Mette Frederiksen
Deenishku waxay u hogaansameen tilmaamaha maamulka ee masaafada, nadaafadda, iwm. Sidaa darteed, hadda waa suurtogal in la sii wado furitaanka tartiibta ee Denmark. Si kastaba ha noqotee, tilmaamaha maamulka caafimaadka ee masaafada jireed iyo nadaafadda wanaagsan wali way soconeysaa, waana muhiim in wado talooyinka in la fuliyo hadey furitaankani noqonayo guul.
Marka lagu daro tilmaamaha la yaqaan, dib u furista waxay kuxirantahay qorsheyn tijaabo ah. Hada waxa la sareysiinayaa in macaal dadka astaamaha khafiifka haysta la baaro, baafiinta cudurka iyo karantiil in lagu sameeyo dadka qaadey cudurka. Intaa waxaa sii dheer, baaritaan ayaa sidoo kale hadda lagu sameynayaa dadweynaha, halkaas oo muwadaniyiinta loogu yeerayo in la baaro, macaal hadey haysanin astaamaha cudurka. Marxaladdaa 2aad ee dib u furinta waxaa ka mid ah:
· Dib u furid buuxda, oo ay ku jiraan suuqyada waaweyn (laga bilaabo Maajo 11)
· Makhaayadaha, kafateeriyada iyo wixii la mid ah, wax wey gadi karaan iyagoo wadaya in ay la socdaan tilmaamaha gaarka ah ee masaafadda jirka (laga bilaabo Maajo 18)
· Fasalada 6 ilaa iyo 10 ayaa ku laaban kara, in ay skool aadaan (laga bilaabo Maayo 18)
· Shirkadaha gaarka ah qaarkood waxay furayaan imaansashada shaqaalahooda
· Ciyaaraha jimicsiga ee xirfadlayaasha waa in la furaa iyadoon daawadayaal imaanin
· Laybeeriyada baa furayaa amaahashada buugaagta (laga bilaabo Maajo 18)
· Ciyaaraha jimicsiga dibedda iyo ururada waa in dib loo bilaabo haddii loo fulin karo hab caafimaad.
· Kaniisadda Dadweynaha iyo bulshooyinka diimaha waa in la furaa si qaab caafimaad ah (laga bilaabo 18 Meey) Go’aan kama gaaro goorta xadka ku meel gaarka ah la joojin doono. Dowladdu waxay taas sheegi doontaa ugu danbeyn 1da Juun 2020. Haddii dib-u-furistu ay sababto in cudurka Corona uu kaco, xawaaraha dib-u-furida ayaa hoos loo dhigi doonaa. Nidaamka Daryeelka Caafimaadku waa inay la socon karaan, anaguna waa inaa is ilaalinaa bilaha soo socda.
Ka sii akhriso https://www.regeringen.dk/nyheter/2020/pressemoede-om-genaabning-af-danmark-fase-2/
Raisalwasaaraha Mette Frederiksen waxay sheegtey in dadaalada Denmark ay shaqeynayaan. Waxay tilmaamtay in horumarku si sax ah u socdo. Waxay ku dhawaaqday, in Denmark bilaabi karto dib u furitaanka si tartiib ah oo inyar inyar ah. Si kastaba ha noqotee, waxay u baahan tahay horumarka in la sii wado sida uu hadda yahay – oo markaa waa inaan loo arkin fursad loo wadin dhiirigelinta. Waqtigan xaadirka ah waa inaan ku hayno, aan ilaalinno masaafadeena oo aan hubinno inaan u hoggaansanno tilmaamaha maamulka. Tani waxay shardi u tahay dib u furista si tartiib ah ee bulshada deenishka ka dib maalinta Ciidda Masiixiga. Haddii kale, ficil ka adag ayaa loo baahan karaa. Cudurka faafa weli muusan dillaacin; waxaan rajeyneynaa in weli dad buka oo aad u tiro badan, bukaano dhakhtarka la dhigey iyo dhimasha intaa ka badan ay imaan doonaan. In kasta oo ay umuuqato inay tahay wax iska hor imaad ah in la furayo Denmark markay dadku dhimanayaan, waxay ku saabsan tahay in cudurka la kontoroolo. Sidaas awgeed raisalwasaaraha ayaa todobaadka soo socda ka wada xaajoonaya dib u furista Denmark si dhow ulana yeelanayo gudoomiyaasha xisbiyada baarlamanka – soona bandhigi doona qorshaha dhamaadka todobaadkan. Intaas waxaa sii dheer, dowladu waxay u direysaa farriin gaar ahaan waayeelka iyo dadka nugul, taas oo ay tiri waa inay fuliyaan inay sii wadaan abaabulidda noloshooda marka loo eego halista cudurka. Waa adag tahay, laakiin si iska hor-imaad ahaan, kan ugu liita waa inuu noqdaa kan ugu xoog badan xilligan. Si kastaba ha noqotee, rajo ayaa jirta, ayay tidhi. Sida ay hadda u muuqato, waxaan ku guuleysanay inaanu jajabino cudurka – xaaladdu wali waa halis oo hadda baaritaan ballaaran ayaa loo baahan yahay. In kasta oo faafitaanka cudurka hadda la xakameynayo, wali waxaan haynsanaa cudurkan faafan.
Maxaad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha ku saabsan corona:
Waxaan hadda ku dhex jirnaa cudur faafid. Sidaa darteed, waxa muhiim ah in la yareeyo faafinta cudurka.
Sidaa darteed guddiga guud ee caafimaadka ayaa qof walba ku dhiirigelineysa inay raacaan talooyinkaan.
Hadaad caafimaad qabtid:
Ka fogow xiriir aan loo baahnayn oo weydiiso dadka kale inay fiiro gaar ah yeeshaan.
Haddii aad u soo dhawaatay qof muujinaya calaamadaha cudurka infekshanka coronavirus, fiirsasho gaar
ah u yeelo astaamahaaga.
Daryeel kuwa aad jeceshahay oo haddii ay gaar ahaan u nugul yihiin laakiinse adigoo ka fog taas samee
Haddii aad leedahay calaamadaha jirradan:
Guriga joog ilaa laba maalmood ka dib marka aad ka bogsato astaamaha.
Ka fogow dadka kalee guriga, kuna hoos jir bustaha sida ugu macquulsan.
Ka taxaddar nadaafadda shaqsiyeed iyo nadaafadda.
U hel kuwa kale oo kaa caawiya wax iibsigaada oo kula xiriir taleefanka.
Haddii aad isku aragto astaamaha sii xumaanaya, waxa laga yaabaa inay qandho badan tahay ama
dhibaatooyin xagga neefsashada ah, markaa wac dhakhtarkaaga.
Naftaada ka dhawr si aad dadka kale u ilaaliso.
Du er her: Mino Danmark / COVID-19 / COVID-19 oo loo yaqaano corona virus